न्यायिक अराजकताले सीमा नाघ्यो, अरु न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाउने अधिकार कार्कीलाई कसले दियो ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
न्यायिक अराजकताले सीमा नाघ्यो, अरु न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाउने अधिकार कार्कीलाई कसले दियो ?
२०७८ जेष्ठ २०, बिहीबार १६:११:००
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत रहेको संवैधानिक इजलासलाई विवादित बनाउन सोही इजलासमा रहेका दुईजना न्यायाधीशले समेत भूमिका खेलेका छन् । खासगरी न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले दिएको रायले सहकर्मी न्यायाधीशको निष्ठामा मात्र प्रश्न उठाएको छैन, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई समेत गम्भीर नैतिक संकटमा फसाइदिएको छ ।
दुवै न्यायाधीशका तर्फबाट लेखेर ल्याइएको कागज कार्कीले इजलासमा वाचन गरेका थिए । त्यसमा उनीहरुले अर्का न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने राय दिएका छन् । यसअघि नेकपाको नाम विवादमा उनीहरुले फैसला गरेको र अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन पनि त्यही नाम विवादकै उपउत्पादन रहेको ठोकुवा गर्दै उनीहरुले सहकर्मी न्यायाधीशहरुमाथि आरोपित गरेका छन् ।
कोही न्यायाधीश कुनै इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा स्वयंले घोषणा गर्ने कुरा हो । अन्य न्यायाधीशले त्यसले बस्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर राय दिन संसारको कुनै कानुन वा न्यायका सिद्धान्त र मापदण्डले दिँदैन । जब अर्को न्यायाधीशमाथि एउटाले औँला उठाउँछ, त्यसलाई गम्भीर मानिन्छ ।
छानबिन र जाँचबुझको रोहमा मात्र यसरी अर्को न्यायाधीशका बारेमा टीकाटिप्पणी गरिन्छ । तल्लो अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतले हेर्दा कुनै गम्भीर विचलन वा कानुनको जबरजस्ती व्याख्या गरेको पाइए अपवाद रुपमा न्यायिक टिप्पणीका सन्दर्भमा न्यायाधीशबारे उल्लेख गर्न सकिन्छ । यसबाहेक सामान्य आदेशहरुमा सहकर्मी न्यायाधीशका बारेमा टिप्पणी गर्ने छूट कसैलाई हुँदैन ।
एउटै इजलासमा बसिसकेपछि हरेक न्यायाधीशको हैसियत बराबर हुन्छ । तथ्य वा तर्कमा विमति हुन सक्ला । विषयवस्तुप्रतिको राय भिन्न हुन सक्ला । तर, त्यसरी विभिन्नता वा फरक राय हुँदैमा अर्को न्यायाधीशमाथि आरोप वा लाञ्छना लगाउने अधिकार हुँदैन । कुनै न्यायाधीशलाई कुनै इजलासमा बस्ने वा नबस्नेबारे अर्को न्यायाधीशले दिन्छ भने त्यो सरासर अर्को न्यायाधीशको निष्ठा र नैतिकतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । उसको विवेक र स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो । यसरी एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई निर्देशित र प्रभावित गर्ने हाम्रो न्यायाधीशको सोच र अवधारणा पनि होइन । यसो गरिन्छ भने त्यो अवहेलनाको विषय बन्छ, बन्नुपर्छ ।
कोही न्यायाधीश कुनै इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा नित्तान्त स्वयंको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । कुनै विषय वा त्यसका पक्षकारसँग पूर्वसम्बन्ध, स्वार्थ, लेनदेन वा पृष्ठभूमि जोडिएको छ भने न्यायाधीशले त्यसबाट स्वतः अलग हुनुपर्छ । सम्बन्धित विवादको विषयवस्तुमा पहिला नै कतै कुनै धारणा सार्वजनिक गरिएको छ भने पनि न्यायाधीशले सोही विषयवस्तु हेर्ने इजलासमा रहनु उचित मानिँदैन । त्यसबाहेक मुद्दाका पक्षहरुले नै न्यायाधीशमाथि आधारयुक्त आशंका प्रस्तुत गरे भने इजलासलाई विवादमुक्त राख्न र न्यायालयप्रति भरोसा बढाउन अलग हुने निर्णय गर्न सक्छ । तर, यो नित्तान्त सम्बन्धित न्यायाधीशको स्वविवेकले गर्ने निर्णय हो । कसैले दबाब वा आग्रह डाल्दैमा न्यायाधीशले यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
यहाँ त इजलासमा एक प्रकारले जुलुस वा शक्ति प्रदर्शन नै हुन्छ । त्यसै कारण इजलास अवरुद्ध हुन्छ । कुनै लिखित माग पनि हुँदैन । कुरैकुरैमा उठेका विवादलाई लिएर न्यायाधीशहरु भड्किन्छन् । कुनै वस्तुतथ्य नबुझिकनै एकथरी न्यायाधीशले अर्कोथरीका विषयमा निर्णय दिन हतारो गर्छन् । कार्की र भट्टराईले केसी र श्रेष्ठका नाममा यही गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा इजलासमा उठेका विषयमा च्याम्बरमा पाँच न्यायाधीशबीच भएको गोप्य छलफलको विषयवस्तु समेत कार्की र भट्टराईले सार्वजनिक गरिदिएर अर्को अमर्यादित, असंवेदनशील र गैरव्यावसायिक आचरण प्रस्तुत गरेका छन् । च्याम्बरमा न्यायाधीशहरुबीच जस्तोसुकै छलफल पनि चल्न सक्छ । विषयवस्तुमा फरक राय लेख्ने अधिकार हरेक न्यायाधीशलाई भए पनि च्याम्बरभित्रका सबै गोप्य विषय सार्वजनिक गर्नु अराजकताको हद हो ।
यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई उनको व्यावसायिक जीवनकै कठोर अवस्था सिर्जना गर्ने काम पनि यिनै दुई न्यायाधीशले गरिदिएका छन् । नेकपा विवाद र अहिलेको विघटन विवाद अन्योन्याश्रित छन्, पहिलाको विवाद सुन्ने न्यायाधीशले अहिलको विवाद सुन्न पाउँदैनन् भनेर कार्की र भट्टराईले सीमारेखा कोरिदिएका छन् । अब राणाले संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था मान्ने कि इजलासमा दुई न्यायाधीशले व्यक्त गरेको न्यायाधीशलाई ? संविधान भन्छ, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य छ । संवैधानिक इजलासका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश भन्छन्, पहिलाको विवाद हेरेको न्यायाधीशले अहिलेको विवाद हेर्न पाउँदैन । आफ्नो विषयमा बोल्दा अरुमाथि सीमारेखा र बारबन्देज सिर्जना गर्ने कार्की र भट्टराईको आदेशले प्रधानन्यायाधीश राणालाई निकै नै अप्ठेरोमा पारिदिएको छ ।
अहिले इजलासमा कोही न्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर उठाइएको विवाद प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । विवादको मूल विषयमा बहसले प्रवेश नै पाएको छैन । तर, कार्की र भट्टराईले एक कदम अगाडि बढेर विषयवस्तुमा समेत राय दिएर सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले नेकपा विवाद र प्रतिनिधि सभा विघटन विवाद अन्योन्याश्रित भएको स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरेका छन् । यसले एकातिर भोलि इजलासमा उपस्थित हुने न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने छ । अर्कोतिर, पहिला नै राय दिइसकेपछि अब त्यही विषयमा सुनुवाइका लागि इजलासमा बस्न अयोग्य भएका छन् । अर्थात्, आफ्नै अयोग्यता सिर्जना गरेर भोलि संवैधानिक इजलासमा बस्ने बाटो समेत कार्की र भट्टराईले बन्द गरेका छन् ।
यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीको विशेष चासो, सक्रियता र स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । राणालाई विवादतिर धकेल्न सकिए कतै प्रधानन्यायाधीशमा आफ्नो पालो आउँछ कि भन्ने लोभ वा प्रलोभन उनले पाएका हुन सक्छन् । ठूलै शक्तिकेन्द्रहरुका स्वार्थ र चलखेल यी प्रकरणमा जोडिएका छन् । त्यसकारण पनि कार्कीमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।
अरु बेला प्रधानन्यायाधीश र अरु शक्तिकेन्द्रसँग तालमेल मिलाएर कार्कीले हिस्सेदारी लिएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्ना केही गोजीका मान्छेलाई अवसर दिइएपछि न्यायपरिषदका अन्य पदाधिकारीका गैरव्यावसायिक हर्कतमा कार्की मौन बसेका छन् । कतिपय मुद्दा उनले दोहोर्याई तेहर्याई आफैले हेरेका छन् । त्यतिखेर उनलाई न्यायिक स्वच्छता, आशंकारहितता र विवादमुक्तताको याद किन आएन ? न्यायाधीश त परै जाओस्, बहिदार बन्ने हैसियत समेत नभएका व्यक्तिहरुलाई उच्च र सर्वोच्चमा नियुक्त गर्दा केही नबोल्ने कार्की अहिले राजनीतिक मुद्दामा अतिरिक्त सक्रियता देखाइरहेका छन् ? यसले पनि उनको भूमिकालाई बढी विवादित, शंकास्पद र रहस्यमय बनाइदिएको छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा रहँदा उनले केके गरे भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयले सुन तस्करी प्रकरणमा गरेको अनुसन्धानको फाइल मात्र पल्टाउँदा पनि धेरै कुरा छर्लंग हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्ने, सहकर्मी न्यायाधीशलाई लाञ्छित गर्ने, अपरिपक्व तवरमा विषयवस्तुप्रति राय व्यक्त गर्ने, गोप्य च्याम्बरमा पाँच न्यायाधीशबीच भएका छलफल सार्वजनिक गर्ने, अर्को न्यायाधीशमाथि सीमा र दबाब सिर्जना गर्ने न्यायाधीश कारवाहीको भागीदार हुनैपर्छ । इजलासमा अराजकता प्रदर्शन गर्ने र अराजकतालाई बढावा दिने यस्ता न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल इजलास तोक्न बन्द गर्नुपर्छ । र, कार्यक्षमता, इमानदारिता तथा व्यावसायिकताको प्रचूर अभाव देखिएको आधारमा न्यायपरिषदमार्फत् संघीय संसद सचिवालयमा लेखी पठाउनुपर्छ । ताकि, अहिले उनले चलखेल गर्न नपाऊन् र भोलि संसद आएपछि आवश्यक कारवाही अघि बढाओस् ।